Paschim Nepal, Author at Paschimnepal.com - Page 366 of 477
उर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा नयाँ नीति घोषणा
काठमाडौं । बिद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा उर्जामन्त्रालयले महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनको घोषणा गरेको छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘पावर समिट २०१६’ उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले नयाँ नीति ल्याउने घोषणा गरेका हुन् । नयाँ नीति र यसका विशेषताहरु १. अबदेखि विद्युत प्राधिकरणले पिपिए (बिद्युत खरिद सम्झौता) गर्दा ‘टेक अर पे’ (अर्थात नीजि क्षेत्रका कम्पनी
जहाँ छोरी जन्मने बित्तिकै तोकिन्छ कसैकी श्रीमती
अछाम । जिल्लाको नाडा गाविस–८ कोल्लीमोरास्थित कर्णाली किनारमा लोपोन्मुख समुदाय राउटे बस्ती छ । जहाँका झुपडीमा १ सय ४९ राउटे अस्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका छन् । उनीहरूमध्ये ९२ पुरुष र ५७ महिला छन् । ५७ महिलामध्ये ३६ जना १६ देखि २० वर्ष उमेर समूहका छन् । तर, उनीहरू सबै एक÷दुई सन्तानका आमा बनिसकेका छन् । जनसंख्या व्यवस्थापनमा खासै चासो नराख्ने राउटे समुदायमा महिलाहरूले उमेर नपुग्दै विवाह गर्न
शसस्त्र प्रहरीद्धारा अवैध काठ बरामद
बर्दिया । अवैध तरिकाले लुकाई राखेको सुराकीको आधारमा बर्दिया स्थीत शसस्त्र प्रहरी सिमा सुरक्षा बलको गस्ती टोलीले बुधवार विहान ८ बजेको समयमा अवैध काठ पक्राउ गरेको छ । बर्दियाको मैनापोखर गा.वि.स. वाड नं. १ स्थित लोखरपुर सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति भित्र वेवारिशे अवस्थामा ६१ दशमलव १२ क्यिुफिट ७ थान अवैध सालका गोलीया पक्राउ गरिएको जानकारी जिल्ला वन कार्यालय बर्दियाका सुचना अकिारी दोर्ण राज शर्माले बता
३४ शिक्षकलाइ स्कुल नजानुकाे कारण माग
वीरेन्द्रनगरका १५ विद्यालयकाे छड्के अनुगमन सुर्खेत । जिल्लाका अधिकास विद्यालयहरुमा दैनिक २५ प्रतिशत विद्यार्थीहरु विद्यालयमा अनुपस्थिती भएको पाइएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतले गरेको छड्के अनुगमनका क्रममा यस्तो पाइएको हो । ७५ प्रतिशत विद्यार्थीहरु मात्र दैनिक विद्यालय जाने गरेको सुर्खेतका जिल्ला शिक्षा अधिकारी जीतबहादुर शाहले बताए । घरायसी समस्या कारणले कम उपस्थित हुने गरेको जिशिअ शाहको
बेग्लाबेग्लै दुर्घटनामा दाङमा तीनजनाको मृत्यु भएको छ। घोराही नगरपालिका–११ रतनपुरचोकमा बा।२१ प।२४६० नम्बरको मोटरसाइकले साईकल यात्रीलाई ठक्कर दिँदा मोटरसाइकल चालकको मृत्यु भएको छ। त्रिपुर नगरपालिका–१० तेघरा बस्ने २७ बर्षीय चुडामणी पौडेलको मृत्यु भएको हो। गम्भीर घाइते साईकल यात्री सोही नगरपालिका–११ कटुकी सेवारका ४५ बर्षीय रेशम बहादुर केसीको घोराही अस्पतालमा उपचार भईरहेको छ। दाङ सदबरिया–१ अर्जुनखोल
डडेल्धुराको पोखरा स्थित डडेल्धुरा पारामेडिकल क्याम्पसले अनुमतिबिना धमाधम विद्यार्थी भर्ना गरेपछि १ सय ६० जना विद्यार्थीको भबिष्य अन्यौलमा परेको छ। पारमेडिकल कलेजले प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ९सीटीइभीटी०बाट कम कोटाको अनुमित लिएर धेरै कोटामा विद्यार्थी भर्ना गर्दा सयौंको भबिष्य अन्यौलमा परेको हो। पैसाको प्रलोभनमा क्याम्पसले अबैधानिक विद्यार्थी भर्ना गराएर लाखौ रुपैया उठाएको थियो। तर ति
प्रलोभन देखाएर थारु समुदायमा धमाधम धर्म परिवर्तन
केही समय अघि जिल्लाको डुरुवामा एक चौधरी बृद्ध बिरामी परे। गाउँका स्थानीयले पुरानै ‘रित’ बमोजिम धामी झाँक्री डाक्न भने। मृतकका छोराले मानेनन्। गाउँलेले अस्पतालमा लैजान भने। उनले त्यो पनि मानेनन्। इसाई धर्मका अनुयायी उनले सख्त बाबुलाई प्रभुको शरण ९चर्च० मा पुर्याए। केही दिनपछि उपचार नपाएर उनको चर्चमै मृत्यु भयो। थारु समुदायमा बढ्दो इसाईकरणको मुख्य कारण भनेको महतवाको भूमिका गौण हुनु हो। पहिले गाउँ
अधिकांश ग्रामीण सडक मापदण्ड विपरीत
डडेल्धुरा जिल्ला सदरमुकामबाट ग्रामीण क्षेत्रमा जाने अधिकांश सडक मापदण्डविपरीत रहेका छन् । सडकहरु निर्माण भई यातायत सुचारु अवस्थामा रहेको भए तापनि जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई भने ती सडकका बारेमा कुनै जानकारी समेत नरहेको जनाइएको छ । जिल्लामा रहेका केही ग्रामीण सडकमा यातायात सञ्चालन गर्नका लागि जोखिमपूर्ण भए पनि यातायात व्यवसायीदेखि अन्य सरोकारवाला निकायले भने कुनै चासो देखाएको छैन । जिल्लाको डुङ्
दोधारा चाँदनीमा दुई पक्कीपुल निर्माण हुने
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिकामा चालु आवभित्रै निर्माण कार्य पूरा गर्नेगरी दुईवटा पक्की पुल निर्माण हुने भएका छन् । नगरपालिकाका वडा नं ५ र ६ जोड्ने भट्टिनालामा र सोही नगरपालिका–१ र २ को मलरियानाला पक्की पुल बन्ने भएका हुन् । मलरिया नालामा रु चार करोड ६४ लाख २५ हजार छसय २९ र भट्टिनालामा रु पाँच करोड २८ लाख ३६ हजार दुईसय ८० को लागतमा पुल निर्माण हुने नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृ
स्रोतव्यक्तिको हिँड्दा हिँड्दै मृत्यु
बैतडी । दार्चुलाको शङ्करपुर घर भएका एक स्रोतव्यक्तिको मङ्गलबार हिँड्दा हिँड्दै अकस्मात मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा शङ्करपुर–३ सातचौरीका ४८ वर्षीय किसनसिंह धामी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रहरी निरीक्षक रणबहादुर चन्दले जानकारी दिए । प्रहरी निरीक्षक चन्दका अनुसार बिहान घरबाट मालिकार्जुन स्रोतकेन्द्र जाने बेलामा एक्कासि मृत्यु भएको हो । उनले भने, “विद्यालय गइरहेका धामी घर नजिकै
Previous 1 … 365 366 367 … 477 Next